2009-01-28 @ 15:02 in Politika Fanampiny: Namana nisy niantso avy any Frantsa nilaza fa nodimandry hoe Ratsiraka Didier ka mitady valiny avy aminareo any andafy any aza fady indrindra Asa noho ny fahalalana fa ho avy teto ny filoham-pirenena ve sa hijery ny fahavoazana mahazo ny fananam-bahoaka no nahatonga ireto olona teto anoloan'ny RNM ireto nanapa-kevitra ny haneho ny heviny manoloana izao toe-draharaha izao, eny fa na dia efa voarara aza ny fivorivorian'olona. Olona tsy nivonona ny ho eny amin'ny kianjan'ny 13 mey mihitsy izy ireto, fa mety ho tahaka ahy izay naka andro ihany koa handalo hamototra akaiky (ho avy eo ny sarin'ny tao anaty trano) ny zavamisy.Somary elaela ny adihevitra fa dia tapaka fa hamelatra sora-baventy eo ampitan'ny RNM no atao. Tsy manao fanamelohana avy hatrany fa miangavy kosa ny hisian'ny filaminana eto amin'ny firenena, mitady kosa ny hialana amin'ny savorovoro izay lasa manapotika ny fananam-bahoaka. Re tamin'ny RDB ihany ny vokatr'izany fametrahana ny sora-baventy izay izay novakiany tao hoe: "Ry Tia Tanindrazana, aza potehina ny firenena". Sora-baventy nataon'olona tafavory kisendrasendra mitady ny filaminana eto Madagasikara io ka tsy te-hanameloka ny andaniny sy ny ankilany izay mety handratra ny fo sy hampihetsika ny hambom-po hamotika indray. Ary ahoana kosa ny hataonao manoloana izany fanapahan-kevitra nioaka izany?Izay ny amin'iny fa hamoaka ny sary fahapotehana ihany koa aho! Ka tsy hamerimberina foana izay mety ho efa navoakan'ny hafa, sarin'ny fahamaizan'ny Magro Antsirabe tazanindavitra, ny Courts Antsirabe anakiroa ary ilay tetezana maomaoriina kely potika etsy amin'ny Cenam 67ha sy ny endriny teo aloha (efa nanahy manko aho fa tsy maintsy ho avy hatrany ny fanapotehana ireny indray andro any kanjo dia io tokoa izy io.Nandritra ny fahamaizan'ny Magros Antsirabesary eo ambony ihany fa somary notomorina kokoaMagros Antsirabe ihany fa joro hafa kosa Shoprite Antsirabe indray, natahotra naka sary ilay namanantsika satria mbola vaovao be amin'ny fakam-baovao Shoprite AntsirabeCourts 67 ha tampoka ity eto ity e! Tetezana ho an'ny olona mbola tsy potika tetsy @ 67ha Cenamizao kosa izy rehefa potika, tsy azo tsara noho ny fandehanan'ny fiara mafy loatra Courts Karmaly AntsirabeCourts Antsirabe, Antsenakely...Manomboka eto kosa ny sary dia ny tao amin'ny RNM sy TVM no hovangiana! sary tebokaefatra ity ambony ity sy ny roa eto ambany jentilisa 28 janoary 2009
Nampidirin'i jentilisa |
37 Hevitra |
aza manapaka lalandra eo ry jentl fa za vao nandany adiny 1 t@ alina nanamboatra theorie a...
piece maitresse ao anatiny i Deba :)
vonoko eo ze mamono an'i Deba an hummmm
@ 17:20, 2009-01-28
tpt mitsy za @ simp
za aloha mbola tsy naheno, mbo nahodiko ny bokitry ny vata fandresam-peo sy ny fahita-lavitra fa tsy naheno izany aho. Mety tsaho indray izany satria betsaka ny resaka deba tao ho ao izay
@ 18:22, 2009-01-28
Misaotra betsaka tamin'ny sary Jentilisa! mampisento ahy ny mijery an'ireto izy!!! indrisy!!!!!!! :(
@ 19:07, 2009-01-28
Aza mampihomehy ry Jentilisa fa ny karazan-dry Deba ireny anie tsy mety maty e.
@ 19:28, 2009-01-28
tsy mety atoro
Efa hoe ny vao2 ihany alefa fa aza mandefa TSAHO, TORAMPO sy resaka tsy MARINA FOTOTRA!
Discredited = very hasina ianareo fa tsy laitra atoro, toa zaza.
@ 19:31, 2009-01-28
Ilay vaovao momba ny fahafatesan'i Ratsiraka dia sarotra ny hanamarina an'izany raha tsy olona akaiky azy.
Raha olona akaiky azy anefa tsy hanaparitaka izany mihitsy, raha ny fijeriko.
Ka aleo atao honohono sy tsaho ny fandraisana ny vaovao toy io.
@ 19:36, 2009-01-28
Koa efa hoe tsy maty izy, inona ary ity maniry olona ho faty ity.
Ny tokony jerena izao dia hoe ho tazomina ve i Ra8, raha tsia dia iza no asolo azy?
@ 19:53, 2009-01-28
Aza manely tsaho hoa
TENENINA FOANA FA EEEEEEEEEEEEEEE!! ANARINA FOANA FA EEEEEEEEEEEEE!!
@ 20:11, 2009-01-28
simp : lol-issima
Marina kosa zany fa zah mbola miandry ilay fotoana hi-prouvé-na na marina na tsia ny théorie-n' simp ve dia ho lasana sahady ilay "raika lahy taloha" iny...
@ 20:14, 2009-01-28
tonga tao amin'ny mail-ko t@ 26/01/09 fa zao vao itako
Ny « LOJIKAN’NY FIFANDONANA » tetikadin’i Andry Rajoelina miaraka amin’ireo mpanao politika tranainy sy ny firenen-dehibe iray.
Mpianatra ety amin’ny Oniversite ny tenako. Tamina mpianatra eny amin’ny Oniversite iray antsoina hoe “Dominique” na “Radomi” no nandrenesako izao resaka izao ka tsy mandry ny eritreritro raha tsy manaparitaka azy aminao. Diniho ny zava-misy ,fa ny tantara no hitsara.
Efa volana maromaro no niketrehan’i Andry TGV ny tetika. Ny tanjona dia ny handrodanana ny fitondrana amin’ny “fitakiana an-dalam-be”. Ny vola efa nahazo betsaka, ny fitaovana izay ilaina misy. Ka izao no paik’ady:
1. Vidina ny Radio sy TV RAVINALA ka soloina VIVA hahafahana manamboatra tsikelikely ny sain’ny vahoaka hankahala ny fitondrana sady hanaovana ny propagandy hahazoana ny fitondrana ny tanànan’Antananarivo ( Ben’ny tanàna).
2. Tamin’izany no efa nisy nilaza fa volan-DRatsiraka sy Pierrot Rajaonarivelo no nampiasainy fa tsy nino ny olona.
3. Tsy ho resy vetivety ny fahantrana ka io no asaina ventesin’ny mpanao politika izay miteny.
4. Kitihina ny fanavaozana ny fianarana ary averimberina fa fanagasiana tamin’ny 72 io. Hatao fitaovana amin’izany ny Katolika izay ao ambadik’ilay firenena tsy tononina.
5. Karamaina ny mpianatra eny sasantsasany eny amin’ny Cité Ankatso mba hanamboatra “cocktail Molotov” hatsipy handoroana tranom-panjakana
6. Karamaina ny jiolahy handroba fananan’olona mba ilazana fa tsy misy fandriam-pahalemana eto.
7. Karamaina ny olona maro mba hitarika fihetsiketsehana any amin’ny faritra sy hitarika grevy.
8. Vidina vola ny mpanao gazety maro mba hivoy ny hevitra fankahalana fanjakana sy hivoy fa sakantsakan’ny fanjakana i Andry TGV amin’ny fanatanterahany ny asa maha ben’ny tànana azy hany ka tsy vitany asa. Tokony hivoy koa ireo mpanao gazety ireo fa tsy milamina ny tànana.
9. Atao ny tetika rehetra mba tsy hisian’ny “ Fivoriambe-faratampon’ny Firenena Afrikana”eto Madagasikara satria hoe misavorovoro eto..
10. Tsy hisy hoazy araka izany ny fivoriamben’ny tany miteny Frantsay amin’ny 2010
11. Tsy avela ho tody hatrany amin’ny fifidianana ity fitondrana ity fa tsy maintsy arodana alohan’izay. Satria mantsy amin’izay fotoana izay efa misy vokany betsaka eo amin’ny fiainam-bahoaka ny MAP ka ho sarotra ny handresy azy amin’ny fifidianana.
12. Tsy maintsy mirodana ary tsy maintsy tafiditra ao anaty velam-pandrika ny fitondram-panjakana ka ny ambon-DRavalo no hamelezana azy.
13. Asaina miteniteny foana ao amin’ny VIVA RATSIRAKA ary dia tsy maintsy hanidy an’ioTV io ny fitondram-panjakana.
14. Aely ny tsaho fa ho samborina I Andry TGV. Io fisamborana azy io no tena tadiaviny mafy hatreto.
15. Hetsehina amin’izay ny vahoaka mba hitaky fa tsy misy ny “ DEMOKRASIA” eto Madagasikara..
16. Ampiasaina ny radio VIVA, Ny radio ANTSIVA, ny TV Plus, ny La Gazette de la Grande ile , ny LA verité sns mba hitarika ny olona hanaraka an’I TGV sy hanaratsy fanjakana.
17. Ny resaka atao dia hanamboarana ny sain’ny olona mba hankamamy indray eo amin’ny sehatra politika ireo goaika antitra very seza efa fantatra.
Fa ity no tena loza : Ny« LOJIKAN’NY FIFANDONANA » tetikadin’i Andry Rajoelina miaraka amin’ireo mpanao politika tranainy sy ny firenen-dehibe iray.
a) Rehefa tsy mampiasa “FORCE” ny fanjakana dia terena hanao izany mba hisy faty olona indray eto Antananarivo.
b) Noho izany dia taritina ny olona hirohotra hanao ankeriny hamoa ny TV VIVA. Efa misy mpitarika nahazo vola hanao an’io. Tsy maintsy hampitandrina ka hanao tifi-danitra sy hampiasa fitaovana mampilatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana.
c) Ary eo no hisy karamaina hitifitra ny vahoaka ary dia hovelona ny saritaka. Iodia tsy mazava na ao amin’ny tafika no voakarama na ao anaty vahoaka hanao an’io fitifirana io.
d) Raha tsy mety ny eny amin’ny VIVA dia taritina ho eny amin’ny Ministeran’ny Vola indray ny vahoaka, sady efa eo akaiky eo rahateo Ambahitsorohitra, mba hitaky ny fialan’ny Minisitry ny Vola hono araka ny resaka efa nataon’i Roland Ratsiraka sady naverin’I Andry TGV teo Ambohijatovo. Tsy maintsy hampitandrina ka hanao tifi-danitra sy hampiasa fitaovana mampilatsa-dranomaso ny mpitandro ny filaminana. Ary eo no hisy karamaina hitifitra ny vahoaka ary dia ho velona ny saritaka syny savorovoro.
e) Hampiaka-peo toy ny fanaony avy eo ireo mpanao politika toa an-dry Daniel RAMAROMISA sy ny forongony mba hitaky ny tetezamita hiverenan’ireo mpanao politika saribakolin’ilay firenen-dehibe eo amin’ny fitondrana.
(1) Mbola hanjakazaka eto amin’ny firenena io firenen-dehibe io satria hiverina ireo saribakoliny.
(2) Mbola vao mainka hahantra ny vahoaka satria hitsitongana ny vola gasy noho ny fikorontanana hatao eto amin’ny firenena.
(3) Mbola tombotsoan’ilay firenen-dehibe ihany io.
(4) Tsy hisy ny fandrosoana eto satria hiady saritaka indray ireo mpanao politika izay hiady seza samy hilaza fa izy no namono ny voay. Tsy ny rehetra anefa no hahazo seza, fa izay efa votendrin’ilay Firenen-dehibe ihany.
Ny fitiavako tanindrazana no nanosika ahy hilaza izao tsiambaratelo izao aminao mba hilazanao ny havanao mba tsy sanatria no ho lasa sorona ho fatifaty foana na haratra foana hampiakatra an-dry zalahy eo amin’ny sezany. Raha anisan’ireo nahazo vola moa maninona, fa raha entim-po amin’ny resabe no tena mampalahelo. Tsy misy mahay manao fahagagana eto ka afaka hanafoana ny fahantrana ao anatin’ny taona vitsivitsy.
Azonao porofoana amin’ny zava-misy ireo voalazako ireo.
Ny fanompoam-pivavahana saika natao teo Ambohijatovo. Ny fanokanana ny kianjan’Andohalo izay natao kimaimaika, hany ka vao avy ny orana dia nirodana.
Ary ny nampalahelo aza nandratra olona mihitsy io firodanana io satria nianjeran’ny tafo tao ireo olona sendra nialoka. Tsy efa fambara ataon’Andriamanitra ve io. Iza no namatsy vola nanamboarana io kianja io ? moa tsy ilay firenen-dehibe ve ? Nahatadidy rahateo ny isika fa tsy io mihitsy ny planina nasehon’i Andry Rajoelina fony izy nanao propagandy tamin’ny fifidianana ho ben’ny tanàn’Antananarivo. Mihevitra izy mantsy fa tsy nisy nahatadidy ireny. Ny sarintsarim-pitokanana ny kianjan’ny Demokrasia teny Ambohjatovo.
Ireny rehetra ireny dia mizotra any amin’ilay “lojikan’ny fifandonana hanaovana sorona indray ny vahoaka”. Raha tia tanindrazana ianao dia aelezo ity amin’ny mailaka na amin’ny fomba hafa.
Tena ekena fa mampandroso ny DEMOKRASIA ary ny fototra lehibe amin’ireny dia ny fifidianana. Tsy misy afaka hilaza fa DEMOKRASIA ny fitarihana ny olona haka fahefana eny andalam-be!
Tsy misy afa tsy ny fifandimbiasam-pahefana amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no filaminana sy fampandrosoana ny firenena.
Izay ny zava misy ka tokony handinin-tena ny mpitondra sy Andry TGV !
Samia mandinika vao manao zavatra ho tombotsoa ambonin’ny firenena ! Mbola fotoana izao hieritreretana.
Ny Kristianina aoka hivavaka fa tand